Muddamni Daangaa Irraaa Sudaanii fi Itiyoopiyaa Gidduu Jiru Itti Fufe Jedhu Xiinxaltoonni
Guraandhalaa 17, 2021
Biyyoota hollaa gidduutti lafa irratti falmiin ka’ee ennaa jiru kanatti loltoonni Itiyoopiyaa daangaa qaxxaamuran jechuun Sudaan torban kana himattee jirti. Falmiin kun Masrii fi Sudaan dhiyeessii bishaan isaanii balaa irra buusa kan jedhan hidha humna ibsaa guddicha kan laga Abbayyaa ilaalchisee muddama jirutti dabalamee jira.
Akka gabaasa Naba Mohiddiinitti Torban kana ministeerri dhimma alaa Sudaan Itiyoopiyaan lafa Sudaan irratti weerara kabajaan itti hanqate geggeessite kan ittiin jedhe, ibsa baase. Loltoonni Itiyoopiyaa Itiyoopiyaa, Kaaba gama dhiyaa fi daangaa sudaan gama bahaa irratti kan argamu daangaa naannoo al-Fashagaa qaxxaamuran jedhamee jira.
Mootummaan Itiyoopiyaa weerara sana hin ganne, garuu Sudaan daangaa ceetee weerara ofii geggeessitu haa dhaabdu jechuun waamicha dabarseera. Falmiin al-Fashagaa yoo xiqqaate waggoota 50f kan ture ta’us, garuu baatii muddee keessa ennaa baqattoonni kurna kumaan laka’aman naannoo waraanaan raafame Tigraay irraa daangaa ce’uun gara Sudaan gama kibbaatti qaxxaamuran deebi’uun ka’e.
Sudaan baatii Amajjii keessa xayyaarri waraanaa Itiyoopiyaa qabiyyee ishee irra balal’ie ennaa jettu, Itiyoopiyaan immoo l